शंकाकै भरमा ऋषि कपुरलाई मार्न गएका थिए संजय दत्त, नीतूले बचाएकी थिइन् ऋषिको ज्यान, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
शंकाकै भरमा ऋषि कपुरलाई मार्न गएका थिए संजय दत्त, नीतूले बचाएकी थिइन् ऋषिको ज्यान
मुम्बइ। धीरुभाइ अम्बानीकी कान्छी बुहारी र अनिल अम्बानीकी पत्नी टीना अम्बानी ६२ वर्षकी भइसकेकी छिन् । ११ फेब्रुअरी १९५७ मा मुम्बइमा गुजराती परिवारमा जन्मिएकी टीना ९ दिदीबहिनीमध्ये सबैभन्दा कान्छी हुन् । टीना सानैदेखि ग्ल्यामरको संसारमा आउन चाहन्थिन् । उनलाई सुरुदेखि नै अभिनय र मोडलिङको सोख थियो । २१ वर्षको उमेरमा उनले फिल्म देश परदेशबाट बलिउड करिअर सुरु गरेकी थिइन् । टीनाले कैयौं हिट फिल्ममा काम गरिन् तैपनि उनी फिल्मभन्दा बढी व्यक्तिगत जीवनका कारण चर्चामा रहिन् । खास गरी संजय दत्तसँगको सम्बन्ध निकै चर्चामा रह्यो ।
संजय दत्त र टीना मुनिम बाल्यकालका साथी थिए । यी दुईले कलेजको पढाइ पनि एकसाथ पूरा गरेका थिए । यसक्रममा उनीहरु नजिकिए र उनीहरुको सम्बन्ध प्रेममा बदलियो । टीना मुनिम संजय दत्तलाई निकै माया गर्थिन् । दुवैको प्रेम बढिरहेको देखेर सुनिल दत्तले फिल्म ‘रकी’ बनाउने सोच बनाए । सुनिलले ‘रकी’बाट संजय दत्तलाई बलिउड डेब्यू गराए । संजय दत्त भर्खर बलिउड डेब्यू गर्दै थिए तर त्यतिबेला टीना सफल हिरोइन भइसकेकी थिइन् । यस्तोमा टीनाले आफ्नो करिअर दाउमा राख्दै देव आनन्दका कैयौं फिल्म छाडेर संजय दत्तसँग रकीमा काम गरिन् ।
संजय दत्त नशाको भोगी थिए । उनी हरेक समय नशामा लठ्ठ रहन्थे जसका कारण टीना उनीसँग निकै रिसाउँथिन् । यद्यपि हरेक कदममा टीा संजयलाई सम्हाल्थिन् । यहाँसम्म कि संजय दत्तको लागि टीनाले आफ्नो करिअर समेत दाउमा लगाएकी थिइन् । टीनाले संजयलाई सम्झाउने किै प्रयास गरिन् तर जब उनी सुध्रिन तयार भएनन् त्यसपछि टीनाले जिन्दगीको सबैभन्दा मुस्किल फैसला गरिन् । टीना संजयलाई स्दाका लागि छोडेर अमेरिका गइन् । टीना गएपछिको पीडा संजयले सहन सकेनन् र दिनरात रक्सीको नशामा डुबेर रहन थाले ।
संजयले बलिउडमा फिल्म रकीबाट डेब्यू गरेपछि टीना र संजयको प्रेमको चर्चा निकै चलेको थियो । यहाँसम्म कि टीनाको विषयमा संजय निकै झगडालु पनि थिए । स्टारडस्टलाई दिएको अन्तरवार्तामा संजयले भनेका थिए कि मैले मेरी गर्लफ्रेण्डको करिअरमा कहिल्यै रोकटोक गरिन सिवाय उनको कपडाको विषयमा । संजयले भने ‘म टीनालाई लिएर निकै पजेसिभ थिएँ । उनी केवल मेरी थिइन् । म चाहन्थें कि स्क्रिनमा उनी आफूलाई एक्सपोज गरुन् । म थोरै स्वार्थी छु । मलाई उनको हिट र फ्लपसँग यत्ति कारण मात्र मतलब छ कि करिअर नचल्दा हायद उनी घरमै बस्नेछिन् ।’
१९८१ मा रकी रिलिज हुनुभन्दा पहिले १९८० मा ऋषि कपुरको कर्ज रिलिज भएको थियो । दुवै फिल्ममा टीना मुनिम नै हिरोइन थिइन् । संजय दत्तलाई शंका भयो कि टीना र ऋषिबीच अफेयर चलिरहेको छ । यही कारण टीनालाई लिएर निनकै पजेसिभ संजयले गुलशन ग्रोवरसँग मिलेर ऋषिलाई कुट्ने योजना बनाए । संजय दत्त जब नशामा ऋषि कपुरको घरतर्फ गइरहेका थिए उनले बाटोमा नीतू सिंहलाई भेटे । नीतूले सोधेपछि संजयले आफ्नो शंका उनलाई बताए । नीतूले संजयलाई बताइन् कि ऋषि र टीनाको बीचमा मित्रताभन्दा बढी कुनै सम्बन्ध छैन । नीतूले निकै सम्झएपछि संजयले ऋषिलाई कुट्ने जिद्दी छाडेका थिए ।